जुवाखालमा प्रहरी र सेनाबीच कुटाकुट, कर्नेलले प्रहरी इन्सपेक्टर कुटे | rochak nepali khabarside
जुवाखालमा प्रहरी र सेनाबीच कुटाकुट, कर्नेलले प्रहरी इन्सपेक्टर कुटे
तुलसीपुर, २० फागुन । अञ्चल प्रहरी कार्यालय राप्तीले जुवाको अखडामा छापा हानेर २२ जना जुवाडेलाई पक्राउ गरेपछी तुलसीपुरमा तरंग पैदा भएको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालयमा डीएसपी कृष्ण प्रसाई प्रमुख भएर आएपछी उनले एउटा जुवा अड्डामा छापा हानेर १९ जनालाई नियन्त्रणमा लिए । पक्राउ पर्नेमा तुलसीपुरमा ‘पैसाकै आडमा’प्रतिष्ठित कहलिएका व्यक्ति पनि थिए । आफूलाई ठुलै शक्ति केन्द्र ठान्ने तुलसीपुरको गिरोह जुवाडे छुटाउन इप्रका धायो । डिएसपीसंग गोप्य बैठकमा बसे । अनि डिएसपीले कारवाही प्रक्रिया अघी नबढाएरै जुवाडेलाई छोडे । त्यसपछी खुलेआम जूवा चल्ने तुलसीपुरमा इप्रकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खासै चासो देखाएको थिएन । त्यसैले पनि जूवा अड्डा निर्धक्कका साथ चलिइरहे । बजारमा दिनदहाडै जूवा चल्न थालेपछी धेरैले प्रहरीकै मिलेमतोमा जूवा चलिरहेको आशंका गरे । त्यहीं बिचमा वडा प्रहरी कार्यालय नेपागन्जबाट इनेस्नेक्टर हेम शाही उर्फ ‘सिंगम’ काजमा इप्रका तुलसीपुर आए । उनले प्रहरीकै संरक्षणमा चल्ने भनिएको जूवा अड्डामा छापा हाने ।
तर, बिडम्बना जूवाडेलाई पक्राऊ गर्न पुगेका इनेस्नेक्टर सिंगम जूवाकै खालमा निर्घात कुटिए । कुट्ने जूवाडे थिए, नेपाली सेनाको १९ नम्बर बाहिनीका कर्नेल मच्छेन्द्र थापा । कर्नेल थापाले इनेस्नेक्टरलाई आफैले मात्रै कुटेनन् । बाहिनी भित्रबाट सादा पोशाकमा सेना बोलाएर नराम्ररी भकुर्न लगाए । तर, कर्नेल थापाले उक्त आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन् । थापाले त्यहीं घटना सेलाउन नपाउँदै केही पत्रकारलाई आफूले जानजान गल्ती नगरेको र रक्सी खाएको बेला उक्त घटना भएको भए आफूले नशाका कारण थाहा नपाएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
जूवा अड्डा छापा हान्न गएका इन्सपेक्टर उल्टै कुटीएर युद्धमा हारेको सिपाही झैं लुरुलुरु फर्कीए । इन्सपेक्टर जूवाको खालमा कुटिदा डीएसपी प्रसाँई मौन बसे । आफू मातहतको इन्सपेक्टर कर्नेलबाट कुटिदा कुट्नेलाई कारवाही गर्नुको साटो डीएसपीले बिदामा बस्न उर्दी जारी गरे । चेन अफ कमान्डलाई शिरोपर गर्दै इन्सपेक्टर सिंगम बिदामा बसे । आफू कुटिदा पीडकलाई कारवाही नगर्ने डीएसपीसंग संगै नबस्ने अठोट लिएका उनी त्यहीं बेला सरुवा मिलाएर अन्यत्रै गए ।
जब सिंगम कर्नेलबाट कुटिएर सरुवा भए, तब तुलसीपुरमा जूवाडेको गुन्डाराज चल्यो । अनि सर्बसाधारणबीच प्रहरीकै मिलेमतोमा जूवा चलेको चर्चा चल्न थाल्यो । यहां सम्मकी इप्रकाका डिएसपी प्रसाँईकै मिलेमतोमा जूवा चलेको उजुरी प्रहरी हेडक्वाटर सम्म पुग्यो । त्यसपछी डीएसपी हेडक्वाटरकै निगरानी परे । त्यती मात्रै होइन अञ्चल प्रहरी कार्यालय राप्तीका प्रमुख एसएसपी प्रेम चन्दले डीएसपी प्रसाँईलाई ‘तपाईको मिलेमतोमा जूवा अड्डा चलेको कुरा माथिसम्म पुगेको छ । योे गलत भयो । यसलाई नियन्त्रण गर्नुस् ।’ भन्दै सुझाए ।
तर, डिएसपीले एसएसपीलाई तुलसीपुरमा जूवा अड्डा नै नभएको जवाफ फर्काए । डिएसपीले तुलसीपुरमा जूवा अड्डा नभएको जवाफ दिएको एक हप्ता नबित्दै हिजो (फागुन १९ गते) अञ्चल प्रहरी कार्यालय राप्तीले तुलसीपुरको वेलकम रेष्टुरेन्टमा छापा हान्यो र २२ जना जूवाडेलाई दुई लाख ५८ हजार रुपैंया सहित नियन्त्रणमा लियो । डिएसपी प्रसाँईले जूवा अड्डा नै छैनन् भनेको ठाउँमा अन्चल प्रहरीले छापा मार्दा २२ जना जूवाडे पक्राऊ परेको घटनाले जूवा चलाउनमा प्रसाँइकै हात थियो भन्ने आरोप लगाउनेलाई थप बल पुगेको छ । तर, डीएसपी प्रसाँइले आफ्नो बचाऊ गर्दै आफूले जूवाडे मात्रै नभई कुनै पनि प्रकारका अपराधीको संरक्षण नगरेका दाबी गर्छन् ।
अञ्चल प्रहरी कार्यालय राप्तीका डिएसपी तुलबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गएको ५ जना प्रहरीको टोलीले जूवा अडमा छापा हानेको थियो । प्रहरी स्रोतका अनुसार जूवाडेले जूवा यति निर्धक्कका साथ खेलिरहेका थिए की मानौं, त्यहाँ जूवाडेले जूवा होइन, केटाकेटीले बाघचाल खेलिरहेका थिए । जूवा खेलिएको कोठाको ढोका समेत खुल्लै थियो भने, जूवाडेका जुत्ता चप्पल समेत बाहिरै यत्रतत्र छरीएका थिए । यसरी केटाकेटीले बाघचाल खेल्दा जस्तै निर्धक्क जूवा खेलेको घटनाले के पुष्टि गर्छ भने, जूवा संचालन आउनुमा प्रहरीको मिलेमतो अवश्य छ । नत्र जूवा लुकेर खेलाइन्थ्यो ।
अझ रोचक कुरा त के छ भने अन्चल प्रहरीले इप्रकाको भ्यान बोलाएर जूवाडेलाई भ्यानमा हाल्दा पहिले त्यहीं जूवा अड्डामा इन्सपेक्टरलाई कुटेका कर्नेल मच्छेन्द्र थापा ‘म बाहिनीको कर्नेल हुँ । एकपटकलाई छोड्नु पर्यो’ भन्दै प्रहरीसंग हारगुहहार गर्न पुगेका थिए । तर, प्रहरीले कसैले भनेर नछोड्ने जवाफ दिंदै नियन्त्रणमा लिएर बुधबार नै अदालत पुर्याई सात दिनका लागि म्याद थपेर कारवाही अघी बढाएको छ ।
कर्नेल थापाले भने आफ्नो कुनै जूवाडेसंग सम्बन्ध नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले आफूले जूवाडेलाई संरक्षण नगरेको दाबी गर्दै संरक्षण गरेको आरोप लगाउनेलाई नछोड्ने दाबी गरे । नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी ताराबहादुर कार्कीले कर्नेल माथि लागेका आरोप बारेमा तत्काल छानविन प्रक्रिया अघी बढाउने र दोषी पाइए कारवाही गरिने प्रतिक्रिया दिए ।
तुलसीपुरमा इप्रकाले जूवा अड्डा नै छैनन् भन्दा अन्चल प्रहरीले छापा मारेर जूवाडे पक्राउ गरेको घटनाले जूवा अड्डा संचालन हुनुमा इप्रका तुलसीपुरका डिएसपीको कुनै न कुनै प्रकारको संलग्नता छ भन्ने कुरा पुष्टी भएको छ ।
Admin21:20:00 AM3comments
त्यो पागल कर्नेल लाई कडा भन्दा कडा कारबाही गरियोस सरकार !!!
एउटा बर्दी लगाएको प्रहरी अधिकृत माथि गरिएको कुटपिट सामान्य हैन त्यस कर्नेल लाई पद बाट नै बर्खास्त गर्नु पर्छ सरकार !
Tyo karnelle ke dinchha deshlai ? Testa narkaharulaita jail Hali hell puryaunu parchha ko ho tyo chinirakhnu jantale pani, yo loktantrik muluk ho Aba Gaye hijoko jasto rajako power lagayera janta lutera kuter khane din pagal thapa eskhai adbharosama ho tyaha illegal dhanda chaleko,
harisharan khadka ji tyo police officerko pani kehi galti thiyo hola natra tettikai nepal army ko kutatai nakhanu parne hoina ra? aaj bholi wordi lagayera singham ra chulbul pandye banne sabaiko soukha rahech. sabai media sathi haru ko kurako pachi nalagnus aaphno patrika bikaun lai je pani lekha chan.